ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးဖြစ်ပွားနေချိန် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသားများလွတ်လပ်စွာ သွားလာနေမှုအား ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ဒါရိုက်တာ ယုန်လေး ~ Myanmar Online News
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးဖြစ်ပွားနေချိန် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသားများလွတ်လပ်စွာ သွားလာနေမှုအား ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ဒါရိုက်တာ ယုန်လေး
2:02 AM ကျန်းမာရေး, အႏုပညာ No comments
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ရောဂါဟာ နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးတွင် ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရသည်။ ကူးစက်ခံရသူတွေနှင့် သေဆုံးသူများဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အဆမတန်များပွားနေပါတယ်။
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုတော်ဒါရိုက်တာယုန်လေးမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသားများ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနေမှုများကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ဝေဖန်ထောက်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ပိုထိရောက်ပါတယ် ။ Save ဖြစ်အောင်နေရာတိုင်း သတိရှိရှိနဲ့ စစ်ဆေးသင့်တာစစ်ဆေး
တားသင့်တာ တာရတာ. အပိုအလုပ်မှ မဟုတ်တာ တရုတ်တွေကို ဘာလို့ အဲ့လောက်တွေ အခွင့်ရေးပေးတာလဲ။
တရုတ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲက တရုတ်လူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြောချင်းမဟုတ်ပါ ။ ကျွန်တော်လည်း တရုတ်သွေးပါပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့နိုင်ငံသားတွေ အကုန်သနားဖို့ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဆို ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် အထင်ကြီးတယ် ။
ကိုယ့်လူမျိုးထက် ပိုပြီး တလေးတစားဆက်ဆံတယ်။ အဲ့အချက်တွေက အကြီးကျယ်မှားနေတယ် ဆိုတာလေးကို
စိတ်ထည့်ထားပြီး ပြင်ဆင်မှ . ကျွန်တော်တို့ အကုန်တိုးတက်မှာပါ။
မြန်မာ နိုင်ငံကြီး ကပ်ဘေးမှ ဝေးပါစေ ။
အရာစာ အဆင်ပြေပါစေ ။🙏🙏🙏 🇲🇲🇲🇲🇲🇲🙏🙏🙏
Source - Yone Lay